Jurors ayaa sii daayay wariye Iowa ah oo basbaas lagu buufiyay oo ay xireen booliska isagoo tabinaya | KWIT
Xeerbeegti ayaa helay wariyaha Des Moines Register Andrea Sahouri oo aan wax dambi ah galin kadib markii lagu soo oogay dambi fudud oo ah inuu kufashilmay kala firdhinta iyo faragalinta falalka rasmiga ah. Waxay sidoo kale wax dambi ah ku weyday saaxiibkeedii hore, Spenser Robnett, isla eedeymahaas, oo watay hanjabaadda ganaaxyo iyo xitaa xabsi.
Xukunka ayaa yimid kadib maxkamadeyn seddex maalmood qaadatay oo ka dhacday Des Moines.
Isniinta waxay ahayd sanad-guuradii koowaad ee kiisaska ugu horreeya ee Covid laga soo sheego gobolka. Shirkeeda todobaadlaha ah ee todobaadlaha ah maanta, gudoomiyaha Kim Reynolds wuxuu ku sheegay in Iowa ay ku dhowdahay inay garaacdo guul kale oo wanaagsan. Reynolds wuxuu ku dhawaaqay in hal-milyanka Iowan laga talaali doono virus-ka mararka qaar maalmaha soo socda. Reynolds wuxuu intaas ku daray in Iowa ay qaadatay in ka badan 950 kun oo qiyaas oo tallaal ah. Taasi waxay u dhigantaa 27% dadweynaha.
Boqolkiiba 13 boqolkiiba Iowans ayaa si buuxda loo tallaalay. Isniintii, sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka gobolka ayaa sheegay in Iowa uu u furi doono xaq u yeelashada tallaalka COVID-19 ee dadka Iowans ee ka yar 65 jir oo leh xaalado hoose sababtoo ah gobollada qaar ayaa si dhakhso leh ugu socdaalaya tallaalka dadkooda waayeelka ah.
In kasta oo ballan la ballansadaa weli waa caqabad. Iowans 65 iyo wixii ka weyn ayaa hada wici kara 211 si ay ula hadlaan “Navude virus” si loo qorsheeyo tallaal.
Ku dhowaad 94% dadka reer Iow ee da'doodu tahay 65 iyo ka weyn ayaa helay ugu yaraan xaddigoodii ugu horreeyay ee tallaal, sida uu sheegay guddoomiyaha. Toddobaadka soo socda, ku dhowaad 95,000 qaadashada ugu horreysa ee tallaallada Pfizer iyo Moderna ayaa loo jeedaa Iowa, waxaana suuragal ah in sidoo kale 4000 qiyaasood oo tallaalka Johnson & Johnson ah.
Rug caafimaad oo tallaal ah ayaa loo abaabulay guriga loo yaqaan 'Mary J. Treglia Community House' Arbacada soo socota, 17-ka Maarso. Lambarka la wacayo si loo diiwaan geliyo waa (712) 258-5137. Waqtiga kama dambaysta ah ee isdiiwaangelintu waa 15-ka Maarso.